Khipha ku-internet Marigold khipha Lutein Umkhiqizi kanye Factory | CCGB
U-Chenguang Biotech – Umhlinzeki womkhiqizo we-lutein obalulekile emhlabeni
Umkhiqizo okhishwe wemvelo ocebile ku-carotenoid Lutein
Amamodeli wokukhiqiza amakhulu, aqhubekayo, futhi azenzakalelayo
Isiza Ukugcina Amehlo Anempilo Nobuchopho
I-United States Patent: I-US 8,921,615, i-B2
Umthombo weBotanical: UMarigold Flower
AmaCarotenoids aziwa kakhulu ngamakhemikhali nangezinto zawo, ikakhulukazi ekuvimbeleni izifo. Le carotenoid Lutein itholakala ku
umthombo wemvelo:Imbali kaMarigold, ngokusebenzisa izinqubo zethu zobunikazi (i-US Patent: US 8,921,615, B2)
I-Lutein inconyelwa njengesengezo sokudla ukuhlinzeka ngamanani adingekayo ale carotenoid ebalulekile yezempilo nokusebenza komuntu. Asitholi i-Lutein eyanele ekudleni kwethu okujwayelekile.
Sitshala ama-hectare ayi-13,500 ama-marigold esifundazweni saseXinjiang, esifundazweni saseYunnan, eNdiya naseZambia. Amaphethini wokuthuthuka we-oda le- “Company + Base + Acquisition station + Farmers” akhuthaza abalimi ukutshala ngezinga elikhulu, ukuphathwa okunamandla.
I-Chenguang Biotech inomshini wokuzikhandla oqhubekayo wokuzikhandla, onokufaka kwansuku zonke kwamathani angama-30, anganikeza amakhasimende ukuphakelwa okuzinzile kwezimpahla
Ukulawulwa Kwekhwalithi Ethembekile
Sineqembu eliphakeme kakhulu labasebenzi bokuhlola, imishini yokuhlola esezingeni eliphakeme, kanye nohlelo oluphelele lokuhlola ikhwalithi.
Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi lwalo lonke uchungechunge lwezimboni selusungulwe ukuqinisekisa ukuthembeka nokuqina kwekhwalithi yomkhiqizo, futhi ukuthunyelwa komkhiqizo kuhambisana namazinga e-US, EU, Japan, kanye naseKorea.
☆ Ukuncishiswa kwengozi yokuDalwa kwe-Macular Degeneration (AMD)
☆ Ukuthuthukiswa kokusebenza okubonakalayo ku-AMD
☆ Ukuthuthukiswa kokusebenza kokubuka
☆ Ukuthuthukiswa kokusebenza kwengqondo
☆ Ukuthuthukiswa kwekhwalithi yempilo ezigulini ezinesifo i-Alzheimer's
☆ I-CCGB inendawo engaphezulu kwamahektare angama-33000 ama-marigold plant, izinhlobo zezinto ezibonakalayo, izinsalela ze-pesticide, ama-antioxidants engeza njll. Alawulwa kahle
☆ I-CCGB ingubuholi bokubona umugqa omkhulu wokukhiqiza okuzenzakalelayo eChina, ngekhwalithi ephezulu
☆ Amandla ayi-30,000.00kg crystal nalo lonke uchungechunge lwe-crystal, powder, ukumiswa kukawoyela, ubuhlalu, ngekhwalithi evelele nokunikezwa okuzinzile
☆ I-United States Patent: I-US 8,921,615, i-B2
☆ ILutein Crystal 75% HPLC & 80% UV / HPLC
☆ Amafutha weLutein 6% & 20% HPLC
☆ Lutein oncibilikiswa ngamanzi 5% HPLC
Gcina kude nokukhanya okuqinile nokushisa; endaweni epholile, eyomile; iphakethe eligcwele futhi eliqinile, impilo yeshalofu ingaphezu kwezinyanga ezingama-24 kwiphakheji yokuqala engavulwa. Uma sekuvulwe okuqukethwe kokuqukethwe ngokushesha.
5% -50% Ithebhulethi 1KG / Alu Bag in 25KG Drum
10% 20% Iphilisi ethambile Isigubhu se-20KG / HDPE esineCarton
50% 10% Ithebhulethi, i-capsule enzima 1KG / Alu Bag in 25KG Drum
5% 10% I-capsule ethambile, isiphuzo nokudla 1KG / Alu Bag in 25KG Drum
75% 80% ukwenza impuphu, uwoyela, ubuhlalu 1KG / Alu Bag in 25KG Drum
Langaphambilini marigold akhiphe-zeaxanthin